Inona no Dikan’ny hoe Mandehana Aloha Mihavana Amin’ny Rahalahinao?
Aoka hatao hoe velona tamin’ny andron’i Jesosy ianao, ary nipetraka tany Galilia. Ho any Jerosalema ianao mba hankalaza ny Fetin’ny Trano Rantsankazo. Mifanaretsaka ny ao an-tanàna, satria tonga daholo ny mpiara-manompo avy lavitra. Te hanao fanatitra ho an’i Jehovah any amin’ny tempoly ianao. Iny ianao fa mamakivaky ny tanàna miaraka amin’ny osy iray, na dia tomefy olona aza ny lalankely. Efa feno olona hanao fanatitra tao rehefa tonga ianao, ka elaela vao anjaranao. Ndeha hanome an’ilay osy an’ireo mpisorona anefa ianao no mahatadidy hoe manana alahelo aminao ny rahalahinao. Mety ho ao anaty vahoaka ao izy, na ao an-tanàna. Efa nohazavain’i Jesosy izay tokony hataonao. (Vakio ny Matio 5:24.) Inona no hataonao sy ilay rahalahinao mba hahafahanareo mihavana indray? Mariho izay valiny marina amin’ilay lisitra eto ambany.
Hiresaka amin’ilay rahalahinao raha hitanao hoe rariny izy raha malahelo
Hiezaka hanitsy an’ilay rahalahinao, satria mihevitra ianao hoe mba diso koa izy na sarotsarotiny loatra
Hihaino tsara an’izay lazain’ny rahalahinao. Na tsy tena azonao aza izay tsapany, dia hiala tsiny amim-pahatsorana ianao satria nampalahelo azy
NY TOKONY HATAON’NY RAHALAHINAO
Hitantara amin’ny hafa eo anivon’ny fiangonana ny zavatra tsy nety nataonao taminy
Hiteniteny anao sy hitanisa an’izay rehetra tsy nety nataonao. Tsy hamelany ianao raha tsy miaiky hoe diso
Hiaiky fa nitaky fanetren-tena sy herim-po avy aminao ny nanatona azy, ary hamela heloka tanteraka
Tsy mila manao fanatitra biby intsony isika izao. Nampianarin’i Jesosy anefa hoe tsy hankasitrahan’Andriamanitra ny fanompoantsika, raha tsy mihavana amin’ny rahalahintsika isika. Ahoana no nampisehoany an’izany?